My iPhone agaghị ndabere na iCloud! Nke a bụ The Real Idozi. - Iphone
iphone rapaara na apple logo ios 10
otu esi egbochi oku oku na iphone
esi ewepụta mmanụ aki oyibo na ntutu isi gị
ngwa pandora agaghị emepe
My iPhone agaghị ndabere na iCloud! Nke a bụ The Real Idozi.
Kwa ụtụtụ, ị na-eteta ịhụ na akwadobeghị iPhone gị na iCloud na ụbọchị ma ọ bụ izu, na ị maghị ihe ị ga-eme. Ma ọ bụ enwere ike ịnwa iji aka gị kwado iPhone gị, mana ị na-enweta ozi ezighi ezi. Tupu ị tie “My iPhone agaghị ndabere ka iCloud!” na pusi, i mara na nke a bụ nnọọ nkịtị nsogbu na iPhone na ndozi dị mfe. N'isiokwu a, m ga-egosi gị otu esi edozi nsogbu ahụ mgbe iPhone gị agaghị ndabere na iCloud .
ogologo oge ka usoro nwa amaala na -ewe
Kedu ihe kpatara na iPhone agaghị m ndabere na iCloud?
E nwere ọtụtụ ihe mere gị iPhone nwere ike ọ gaghị enwe ike ndabere iCloud. Ọ dabara nke ọma, imirikiti dị mfe idozi. Maka nkwado ndabere nke iCloud na-arụ ọrụ, ekwesịrị ijikọ iPhone gị na Wi-Fi ma nwee ebe nchekwa zuru oke na iCloud iji chekwaa nkwado ndabere gị - yabụ ebe anyị ga-amalite. Aga m egosi gị otu esi edozi nsogbu abụọ a na - ahụkarị nke na - egbochi iCloud backups: enweghị njikọ Wi-Fi na ezughi oke ebe nchekwa iCloud.
Mara: N'ihi na iCloud backups na-arụ ọrụ n'abalị, Ihe 4 kwesiri ime: Ekwesiri ijikọ iPhone gị na Wi-Fi, a ga-enwerịrị ohere nchekwa iCloud dị, iPhone kwesịrị ka etinye ya, yana enyo ga - apụ (nke pụtara na iPhone gị nọ n'ụra) .
1.Jide n'aka na iPhone gị ejikọrọ na Wi-Fi
iCloud backups na-arụ ọrụ naanị na njikọ Wi-Fi n'ihi ọnụọgụ data nke enwere ike ịkwado n'otu nkwado ndabere. Ọ bụrụ na iPhone ejikọtaghị na Wi-Fi, ị nwere ike ịgba ọkụ na atụmatụ data ikuku gị ọ bụla n'abalị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnwe data na-akparaghị ókè, ọ na-adịkarị nwayọọ karịa Wi-Fi na nkwado ndabere na mpaghara nwere ike were ụbọchị were mezue. Nke a bụ otu ị ga - esi jide n'aka na iPhone gị ejikọtara na Wi-Fi:
Meghee Ntọala gị iPhone.
Kpatụ Wi-Fi n’elu ihuenyo.
Kpatụ netwọk Wi-Fi ịchọrọ ijikọ.
Pịnye na netwọk paswọọdụ ma ọ bụrụ na kpaliri na pịa Jikọọ bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ.
Ugbu a ị jikọtara na netwọk Wi-Fi, gbalịa ime nkwado ndabere iCloud site na ịme ihe ndị a:
Kpatụ aha gị n'elu ngosipụta ahụ.
Kpatụ Ndabere iCloud . Dị njikere na agbanwuru n'akụkụ iCloud ndabere agbanwuru.
2.Jide n'aka na i nwere zuru iCloud Nchekwa
Ihe ọzọ mere na nkwado ndabere gị iCloud nwere ike ịda mba bụ n'ihi enweghị nchekwa iCloud dị. Iji lelee nchekwa iCloud gị dị, mee ihe ndị a:
akụkụ ihuenyo anaghị arụ ọrụ
Kpatụ aha gị na ngosipụta ahụ
N'elu menu a, ị ga-ahụ ọnọdụ nke nchekwa iCloud gị. Dịka ị pụrụ ịhụ, nchekwa iCloud m jupụtara!
Ijikwa gị iCloud nchekwa, enweta na Jikwaa Nchekwa . Can nwere ike ma pịa na ngwa dị n'okpuru iji jikwaa ya iCloud nchekwa, ma ọ bụ ị nwere ike ịzụta ihe iCloud ohere nchekwa site na ịme ọpịpị Nweta nkwalite .
Ozugbo ị kwadoro na ị nwere nchekwa iCloud zuru ezu, gbalịa kwado iPhone gị ọzọ site na isoro usoro ndị dị n'elu.
Banye na Laghachi Na Akaụntụ iCloud Gị
Ihe ngwọta ọzọ ga - ekwe omume mgbe iPhone ga - enweghị nkwado ndabere na iCloud bụ ịpụ na ịlaghachi na iCloud na iPhone gị. Nke a nwere ike idozi nsogbu nyocha ọ bụla nke nwere ike igbochi iCloud backups na-arụ ọrụ.
Pịgharịa gaa ala na enweta Akaụntụ & Okwuntughe .
Pịgharịa gaa na ala nke ihuenyo ahụ wee pịa Pụọ.
Kwenye na ịchọrọ ihichapu ntọala niile ma na ị ga-apụ ma bufee gị na peeji nke ịbanye iCloud.
Tinye iCloud aha njirimara na paswọọdụ na-eso ndị nọ na ihuenyo kpaliri. Ozugbo ị bịanyere aka na ya, gbalịa kwado iPhone gị ọzọ.
iphone ojii ihuenyo nwere loading okirikiri
Ndi ingbanye na iCloud Kpachapu faịlụ Na My iPhone?
Ole na ole na-agụ akwụkwọ jụrụ banyere mmapụta na-egosi na gị iPhone mgbe ị na-pụọ nke iCloud. Ozi ahụ na-ekwu na ị ga-ewepụ (ma ọ bụ hichapụ) data na iPhone gị. Aghọtara m kpamkpam ụjọ ọtụtụ mmadụ na-enwe mgbe ha hụrụ ya, mana ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe gị.
Chee echiche banyere iCloud dị ka ụlọ ndekọ na-edebe faịlụ niile nke faịlụ gị na iPhone. Ọ bụ ezie na ị na-ewepụ ha na iPhone gị, faịlụ gị niile na-echekwa na iCloud Drive maka nchekwa dị mma. Mgbe ị banye ọzọ na gị iPhone, gị niile data ga-akpaghị aka redownload gị iPhone. Gaghị efunahụ ihe ọ bụla na usoro ahụ.
Ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu na-akwado iPhone gị na iCloud, ọ bụ oge iji tọgharịa ntọala iPhone gị. Usoro a agaghị ehichapụ ọdịnaya ọ bụla na ekwentị gị - naanị ntọala ntọala dịka okwuntughe netwọk Wi-Fi, Ntọala nnweta, wdg. N'aka nke ya, ntughari a nwere ike ihichapụ ntọala ọ bụla na-egbochi gị iCloud backups.
Kpatụ izugbe .
Pịgharịa gaa na ala menu ma pịa Tọgharia .
Họrọ Tọgharia Ntọala niile ma gosi na ị ga-achọ ịga n'ihu. Mgbe gị iPhone malitegharia, nwalee gị ya site n'ịrụ ọzọ iCloud ndabere. Ọ bụrụ na ọ naghị ndabere, gụọ na.
5. Ndabere gị iPhone Na iTunes Ma ọ bụ Finder
Ọ bụrụ na ndozi ndị dị n'elu arụghị ọrụ, ịnwere ike iweghachi ngwaọrụ gị. Tupu ịme nke a, jikọọ iPhone gị na kọmputa gị ma kwado ya site na iji iTunes ma ọ bụ Finder (na Macs na-agba ọsọ macOS Catalina 10.15 ma ọ bụ karịa). Ịrụ iTunes ndabere, soro usoro ndị a:
Jikọọ iPhone na kọmputa gị site na iji nyere eriri USB na-emeghe iTunes.
Pịa bọtịnụ iPhone n'elu windo iTunes.
Lee kwue na etiti nke ihuenyo n'okpuru Backupsheading. Pịa bọtịnụ kpọrọ Nke a
kọmputa n'okpuru Akpaghị aka kwado ndabere nkụnye eji isi mee. Mgbe ahụ, pịa Zọpụta Ugbu a bọtịnụ n'aka nri nke ihuenyo ndabere gị iPhone na iTunes.
Iji kwado iPhone gị site na iji Finder, jikọọ ya na eriri Lightning. Mgbe ahụ, pịa gị iPhone n'okpuru Ọnọdụ .
bọtịnụ olu ipad anaghị arụ ọrụ
Na Ndabere ngalaba, pịa gburugburu na-esote Zọpụta data niile dị na iPhone gị na Mac a . N'ikpeazụ, pịa Zọpụta Ugbu a .
6. DFU Weghachi gị iPhone
Mgbe nkwado ndabere gị mechara, soro anyi nkuzi banyere otu esi esi DFU weghachi iPhone gi. Iweghachite DFU dị iche na weghachite iPhone dị ka ọ na-ehichapụ ma ngwanrọ ngwanrọ na ngwaike nke iPhone gị, na-ehichapụ iPhone gị nsogbu na nsogbu ọ bụla. Nke a na ụdị iweghachi na-hụrụ dị ka ọgwụgwụ-niile-na-niile ngwọta maka iOS software glitches.
iPhone Kwadoro Na iCloud Ọzọ
Ma ebe ahụ ị nwere ya: Data gị dị mma n'ihi na ị iPhone na-akwado iCloud ọzọ. Jide n'aka na ịkekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta iji kụziere ndị enyi gị na ndị ezinụlọ ihe ị ga-eme mgbe iPhone ha agaghị ndabere na iCloud. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu iCloud ọzọ, ka anyị mara na ngalaba ndị dị n'okpuru!